आशिका दिदीको कालो पेन्टी | नेपाली यौन कथा - Naughty Nepali
Nepali Naked Photos
Saraly Aunty – Nepali Sex Story
एक देसी प्रेम कथा
निम्न वर्ग की प्रेम कहानी
Who wish to have this hot cuteee
भर्जिन केटी र अन्टी लाई चिकेको – Virgin kt ra aunty lai chikeko Part 4
Home » Nepali Sex Stories » आशिका दिदीको कालो पेन्टी | नेपाली यौन कथा
आशिका दिदीको कालो पेन्टी | नेपाली यौन कथा
त्यो फ्ल्याटमा महिनौ दिन म एक्लै बसे। बेलुका कलेजबाट फर्किएपछि देखे फ्ल्याटका दुई खाली कोठामा सामान सारिएको रहेछ। जिउ टम्म मिलेकी एक युवती भित्र सामान मिलाउँदै थिइन। फर्निचरहरु ठाउँमा राखिसकेको रहेछ। उनी कपडा निकाल्दै दराजमा थन्क्याउँदै गर्दा म कोठाको ढोका खोलेर भित्र छिरे।
कसैले ढोका ढक्ढक्यायो। लुगा फर्दै थिए। ढोकामा चुकुल नलगाएकाले ढोका खुलिहाल्यो। बाहिर उभिएकी टाइट टिसर्ट अनि टाइट हाफ पाइन्ट लगाएकी केटीसंग आँखा जुध्यो। ‘सरी..’, लाजले गाला रातै भयो। हतपत्त ढोका लगाइन। मैले छिटो छिटो ट्राउजर घुसारेर ढोका खोले।
‘दराज अलि सार्नु पर्ने, मलाई हेल्प गर्ने?’ उनले सोधिन।
‘ओके, भइहाल्छ नि्।’
म उनको कोठामा छिरेँ। खाटमा छरपस्ट लुगा थिए। ब्रा, पेन्टी। बुट्टा फरक, तर रंग सबैको कालो। दुवै जना मिलेर दराज उनले भनेको ठाउँमा सारियो।
‘भाईको नाम के हो नि?’, उनले सोधिन।
‘सुमन, तपाईको नि?’
‘कस्तो दामी नाम, दिदी चाहीँ कस्को आशिका नि?’, जिस्क्याएर सोधे।
‘आफ्नै नि।’ उनले मस्किदैँ भनिन।
लामो कपाल, उनी कोठा मिलाएर असिन-पसिन भएकी थिइन। लगाएको सेतो टिसर्ट भिजेर भित्रका वस्त्र देखिएका थिए। उनको छाती आकर्षक थियो। हाँस्दा गालामा सानो खाल्टो पर्ने। आँखामा गाजल लगाएकी, अनुहारमा अरु मेकअप थिएन। टिसर्टको बाहुला माथी सारेकी उनको गोरो छाला धुलै धुलै थियो।
‘खाट पनि अलि पछाडी धकेलम न’
म उनि उभिएको ठाउँ कटेर खाटको सिरानी पट्टी गएँ। उनको शरिरबाट पसिनाको उत्तेजना बास्ना नाकमा पर्यो। जिउँ सिरिङ्गै।
‘अरु केही छ दिदी मैले गर्न सक्ने?’
‘केही भयो भने बोलाउँछु नि हुन्न, यहिँ त छौ।’ उनले हाँस्दै भनिन।
काठमाडौंमा प्रोजेक्टको सिलसिलामा आएकी रहिछन्। उमेर त्यस्तै २६-२७ हुनुपर्छ। मैले पढदै गरेको सुनाएँ। उनले सामान मिलाइ रहिन। म कोठा तिर लागे।
बेलुकी कोठा ढकढक भयो।
‘भाई खाजा खायौं?’
‘अब खाने, तपाईले खानु भ’यो?’
‘म त खाजा बनाउन लागेकी, तिमीलाई पनि पकाउन लागेकी, आउ यतै।’
उनी अस्वभाविक फ्र्याङ्क रहेछिन्। संगै उनको किचनमा छिर्यौं।
‘घर कता तिम्रो?’
‘झापाली त चतुर हुन्छन् रे नि त’
‘हो र? अब थाहा पाइहाल्नु हुन्छ नि तपाइले।’, मैले उनको कुहिनामा धक्का दिदैँ मस्किदिँए।
‘तपाइको कता नि दिदी?’
‘मेरो पोखरा हो।’
‘पोखरा तिरका केटीहरु त हट हुन्छन् नि’
‘है, म छैन र?’
‘तपाई हट भएर त भनेको नि आशिका दिदी।’, उनी मुस्काई। गालामा खाल्टो पर्यो।
उनले लुगा फेरिसकेकी थिइन। कालो चिप्लो समिज जस्तो टिसर्टमा उ साच्चै हट देखिन्थिइन। उनका आकर्षक छाती पुट्ट उठेका, टिसर्ट माथीसम्म स्तनले बनाएको चिल्लो खाल्डो देखिन्थ्यो। हाफ पाइन्टमा उनको सेता तिघ्रा, सलक्क परेका खुट्टा अनि मसिना लामा औँला। उनका अंग अंग विकसित थिए।
उनले खाजा बनाउन थालिन। हामी गफिन थाल्यौं। घरकी एक्ली छोरी, पोखराको एनजीओमा काम गर्ने, दुई वर्षको लागि काठमाडौं सिफ्ट भएकी रहिछिन्। हिन्दी गित र फिल्म हेर्न मन पर्ने रहेछ। फिल्म हेर्न गइरहनु पर्ने, मलाई समय मिलाएर जानु पर्छ है भन्दै प्रस्ताव गरिन। यस्ती च्वाँक केटीसंग फिल्म हर्न जान मन कसलाई नहोल। मैलै हुन्छ भने। खाना खाने समयमा खाजा खाइयो। बेलुका अब केही खानु पर्छ जस्तो थिएन। हामी उनको बेडरुमा गयौं।
‘तिमी ड्रिङ्क्स पनि गर्छौं।’
‘कहिले काहीँ।’ लुकाउनु पर्ने केही थिएन।
‘खाने त आज?’ उनले प्रस्ताव राखिन।
‘खाम न त। तपाई थाक्नु भ’को पनि छ, आराम पनि गर्छ।’
‘पसल चिन्या छैन, किन्न तिमी पनि हिडं है। बरु गइहालम अध्याँरो भइसक्यो।’
कमसेकम लुगा फर्छु भनेको भए म मननलागि नलागि भएपनि बाहिर गइदिन्थेँ। फ्ल्याटमा कोही नभएको थाहा पाएकी आशिकाले फाइदा उठाइन। उनले लाजै नमानी कालो टिसर्ट फुकालिन। भित्र कालै रंगको ब्रा थियो। पोटिला स्तनको तल्लो भागमा ब्रा अडिएको, सेतो छालामा कालो ब्रा निकै सेक्सी देखिने। टम्म परेको सुडौल शरिर, नाइटोसंगै ट्याटु खोपाएकी, शरिर तातेर आयो।
म उनलाई घुर्दै थिएँ। दराजबाट अर्को टिसर्ट निकालेर लगाइन। मैले केही बोलिन।
उनको हिडाइमा छुट्टै लचकता थियो। ठमठम परेर हिड्दा उनका पुठ्ठो यता उता मर्किन्थ्यो। अनि म अगाडी लागि पसलसम्म पुगेर दुई वोत्तल वाइन र केही प्याकेटका खानेकुरा किनेर फर्क्यौं।
संगै कोठमा छिरेपछि। वाइन भुँइमा राखि बिना कुनै संकोच उनले फेरी टिसर्ट फुकालिन। खाटमा फालिन। दुवै हात पछाडी लगि ब्रा फुस्काएपछि भने मेरो होस् उड्यो। उनको जिउमा लत्रिएको स्तन निकै टाइट तर ठूला थिए। भर्जिन केटीको झै उनको स्तनको टुप्पो कलिलो कैलो थियो। उनले अघिको समिज जस्तो कालो टिसर्ट घुसारिन।
‘दिदीको त कत्रा हुन।’, नबोली बस्न सकिन।
‘छ्या। कस्तो फोहोरी बोलेको।’, चेपारे पार्दै भनिन।
दुवै भुँमा चक्ला ओछ्याएर बस्यौं।
‘ब्रा फुकाल्दा अप्ठ्यारो हुँदैन दिदी, ठूला लत्रेका छन्।’
‘दिदीसंग पनि त्यस्तो बोल्ने हो भाई?’ उनले आँखा घुमाउँदै भनिन।
‘अब अगाडी देखिहाले दिदी, मनमा कुरा राख्ने खालको परिन म।’, मैले पनि सफाई दिए।
उनको टिसर्ट बाहिर स्तनका टुप्पोले बनाएको डोब प्रष्ट् देखिन्थ्यो।
वाइन ग्लासमा हाली चियर्स भन्दै पिउँन थाल्यौं। उनी दिनभरको कामले निकै थाकेको बताउँदै थिइन।
‘बस्न गाह्रो भयो, पख है म पाइन्ट फुकाल्छु।’
खाटमा बसेर उनी पाइन्ट खोल्न थालिन। टाइट पाइन्ट उनको खुट्टाबाट सजिलै निस्क्यो। सप्रेका साँप्राका मासु हल्लिए। ब्रासंगै म्याचिङ गर्ने कालै पेन्टी। उनले फ्रक निकालेर लगाइन। उनको कालो पेन्टी पलेटी मार्दा सर्लक्क देखिन्थ्यो। उनको पेन्टी उनले देख्ने गरि नियाल्दै भने, ‘दिदीलाई कालो रंग खुबै मनपर्छ जस्तो छ।’
‘ल हेर यो मान्छेको ध्यान कता ग’को’, मेरो प्रश्नको उनले सोझो जवाफै दिइनन्।
‘तपाइको फ्रकबाट भित्र त्यस्तो सुन्दर चिज छ, आँखा अन्तै नमोडिने के।’, मैले जिस्किदै भने।
वाइनले शरिर तताउँदै थाल्यो। अगाडी बसेकी प्वाँट केटीको गतिविधिले झन् मनमा आवेग पैदा भइरहेको थियो।
‘तपाइको साच्चै सेक्सी हुनुहुन्छ। कस्तो मिलेको ज्यान छ भने।’
‘पोखराकी केटी पो हुँ त।’ उनले मस्किदैँ भनिन। मैले खुट्टा पसारे। उनको पलेटी मारेको घुँडाको साइडसम्म पुग्यो। उनको फ्रक पलेटी मार्दा सर्केर माथी पुगेकाले मोटो सेतो साँप्रा छताछूल्ल थियो।
‘त्यहि त दिदी, तपाईको स्तन कस्तो ठूला चिल्ला अनि पुट्ट, समातिहालौ जस्तो’
‘अब्बुई तिमी त सारै भल्गर पो हुँदै गयौं, रक्सी लाग्न थाल्यो के हो?’
‘रक्सी भन्दा तपाईको जवानीले मात बढी लाग्यो क्या दिदी’ मैले खुट्टाले उनको साँप्रामा स्पर्श गरे। उनले केही बोलिन। ग्लासको वाइन स्विट्ट पारिन। अनि अर्को बोत्तल खोल्न थालिन। मेरो ग्लासमा पनि भरेपछि उनी फेरी वाइन पिउन मस्त भइन।
‘तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन?’
‘पहिले थिए दिदी, अहिले एक्लै तड्पिरहन्छु।’
‘मान्छेको दुख बुझ्नु छैन, तपाई झन् हाँस्नुहुन्छ यार!’
‘के दुख भयो त, एक्लो ज्यान झन् सजिलो नि।’
‘हुन्छ सजिलो, आफ्नै हल्लाउँदै बस्न के को सजिलो, मान्छे पाए त हो नि।’
‘छ्या तिमी खाली यस्तै कुरा गर्छौं।’
‘के छया नि दिदी, मेरै अगाडी नाङ्गै दुध देखाउँदै लुगा फेर्दा के म चाँही ढुङ्गो हो र?’
‘त्यो त मैले तिमीलाई चेक गरेकी नि।’, उनले जिस्किदै भनिन। मैले उनको स्कर्ट खुट्टाले अलिक माथी सर्काइदिएँ। अब उनको कालो पेन्टी झनै स्पष्ट देखियो।
‘छ्या नचलन हौँ’, उनले स्कर्ट घुंडा तिर तानिन।
‘ह्या दिदी हेर्न दिनु न, मज्जा आइरथ्यो, तपाईको के जान्छ र?’
‘अँ, देखाउँदै हिड्ने चिज हो नि!’
‘देखाइ हाल्नु भो त अघि तपाई ठूला ठूला दुध, चुस्दा नि रसै आउला जस्ता’
यति कुरा गर्दासम्म आफु उत्तेजित भइरहँदा पनि आशिका भने कुनै चालामाला नै देखाउँदिनन्। केटी त फ्र्याङ भन्नु मात्र कि रहिछिन्।
‘दिदी खपिनसक्नु पो भो त, खै खै तपाईको दुध बाहिर निकाल्नु न’
‘छ्या भयो यस्तो कुरा नगर त’
बालै दिन्नन त। आफ्नो ध्यान भने उनको पातलो समिज भित्रको ठूला ठूला स्तनमा थियो।
उनले वाइनको बोत्तल रित्याउने गरि दुवैको ग्लासमा भरिन। मैले स्वाट्ट पारे। उनी बिस्तारै पिउन थालिन।
मलाई साह्रै भयो। ट्राउजरबाट स्वाट्ट फन्केको लिङ्ग निकालेर उनकै अगाडी चलाउन थाले।
‘बाफरे, तिम्रो भाई त रन्केछ त।’, बल्ल विषय प्रवेश गरिन। ८ इन्चको मोटो घाटो देखेपछि त उनी पनि तरंगित भइछन्। वाइन स्वाट्ट तानेर सकिन।
‘के छ दिदी बिचार, चुसिदिने हो त?’
‘छ्या, घिन लाग्दो।’
‘हल्लाउन नि नहुने’
एक छिन दोधारमा देखिएकी उनी मतरि सरिन। उनी साइडमा बस्दा उनको शरिरबाट आएको पसिनाको बास्नाले त्यसै उत्तेजित पार्यो। उनका लामा औलाले लिङ्ग च्याप्प समाते। मैले पुरै ट्राउजर खोले। उनका हात सलबलाउन थाले। मुसार्न थालिन। भिजिसकेको थियो। उनको एउटा स्तन टिसर्ट बाहिर निकालिदिएँ।
स्तनको मुन्टा कठोर भइसकेको थियो। दुध निकै टाइट थियो। स्तनमा जोडले पड्काएँ।
लिङ्ग उनको हात भित्र बाहिर गर्न थाल्यो। निहुरेर दुधका मुन्टा चुसे। बास्नादार।
लिङ्ग झनै कडा भयो। उनको साँप्रा मुसार्दै योनीसम्म हात पुर्याए। कालो पेन्टी बाहिरसम्मै उनी भिजिसकेछिन्।
‘के भयो।’ उनले सोधिन।
‘पुति त पुरै भिजाइसक्यौ त।’
‘अघि सम्म त दिदी भन्दै थियौं, अहिले सिधै नाम मात्रै?’ उनले लिङ्ग जोडले अचेटिन।
‘अघि सम्म दुध हेर्दै मात्र थिए, अहिले चुस्न पनि थाले नि त’, उनको स्तनमा फेरी पड्काएँ।
‘दुख्यो के’, दुई औलाले लिङ्गको टुप्पोमा प्याट पारिन। झनक्क दुख्यो।
मारी टाउको अचेटेर ठाडो भएको लिङ्गमा मुख जोतिदिएँ। टाउको उठाउन सकिनन, न मुख नै खोलिन। गुलाबी ओठ भरी भिजेको लिङ्ग दलिरहे। अलिक बल लगाइर टाउको अझै धकेले, मुखमा स्वात्त पस्यो। आफैले बल गर्दै टाउको धकेलिरहे, जोडले पेले पुरै लिङ्ग उनको मुखमा छिर्यो। अलिक हलुको बनाएँ। उनले स्वात्तै निकालिन।
‘छ्या, मुख भरी लाग्यो। जबरजस्ती नगर त’
फेरी टाउको धकेलेर लिङ्गसम्म पुर्याइदिएँ। जोडले यो पटक तलैबाट आफैले बल गरेर लिङ्ग छिराए। धक्का दिदैँ मुखमा संभोग गरे। उनी मेरो पञ्जाबाट निस्कने प्रयास मै थिइन।
‘ह्या यति भइसक्दा त मनलगाएर चुस्नु नि’ उनको स्तनको मुन्टा मज्जाले निमोठिदिएँ। उनलाई दुखेछ क्यारे हातले तिघ्रामा चिमोटिन। मैले बल गर्न छोडिदिएँ। उनी सन्किदैँ उठिन। खाटमा गएर बसिन। मलाई झन् सजिलो, गएर खाटमा लडाएँ। खुट्टा खाटबाट लत्रङ्ग तल झरेका थिए। स्कर्ट जोडले ताने, दुख्ने गरि फुस्कियो।
‘ऐया, कस्तो जबरजस्ती हो के?’
कालो पेन्टी झनै जोडले ताने। इलास्टिक छालामा रगडिदै साँप्राबाट बाहिर आयो। दुखाइले आंखा चिम्लिन। घम्लङ्गै उनको योनीमा मुख जोतेँ। सेभ नगरेको उनी योनी वरिपरि लामा लाम घुमेका रौं थिए। जिब्रो योनी भित्र हाल्दै हातले रौं दुख्ने गरि ताने।
उनी सिरिङ्ग भइन। उनी माथी घोडा चढेर उनका हातले स्तन मडार्दै उनको ओठ चुस्न थाले। उनी शिथिल थिइन। दिनभरको थकाइ, रक्सीको मात अनि आफु माथी चढेको केटाको शरिर भरिको स्पर्श उनलाई खपिसक्नु थिइन।
लिङ्ग हातले समात्दै उनले योनीमा ठेल्न थालिन। मैले माथीबाट पेले। टाइट योनीमा ल्वात्दै छिर्यो। तातो भिजेको नरम कुण्डमा होम्दा आनन्दको सीमा रहेन।
‘अम..अँ…अँ…फुट्ने गरी चिक, छिटो छिटो’, आशिकाको आवाजमा कामुकता थियो। अझै बल मिल्यो। छिटो छिटो भ्याट भ्याट गर्न थाले। खाट लचक लचक हल्लिन थाल्यो। आशिका चिच्याउन थालिन। योनीबाट झनै चर्को आवाज आउँदै थियो।
निकै बेर उनी माथी मच्चिएँ। उनी तलबाट ठेल्न थालिन। पुरै स्वात्तै छिराउँदा उनको साँप्रा ठोक्किन्थयो। उनको आवाज तीव्र हुन्थ्यो। उनी सन्तुष्टीको चरम सीमामा थिइन। ‘भित्र नझार है’
एकै छिनमा मैले स्वात्त लिङ्ग निकाले, उत्तानो परेकी उनीमाथी घोप्टी परि लिङ्ग मुखमा हालिदिएँ। उनको योनी चाट्न थाले। उनको योनीको बास्ना र रस निकै मिठो थियो। ‘ख्वात ख्वात’ उनको मुखमा जोड दिन थाले। हुलुलु मुखै भरिने गरि लिङ्गले वीर्य झार्यो। खाटमा पल्टिएँ। पहिलो दिनमै साइडकि केटीलाई चिक्न पाउँदाको मज्जाले निकै खुसी भएँ। उनी मुख धोएर नाङ्गै फर्किन। दुवै अंगालोमा संगै निदाएछौं।
bhagyamani choro lucky son nepali sex story, nepali chikeko katha, nepali sex story, नेपाली यौन कथा
Parbati Didi Sanga Maja Liye (Nepali Sex Katha)
नेपाली यौन कथा | सजिना – भाग १
Saraly Aunty - Nepali Sex Story
Nepali Chikeko Video 2019
किन गति छाडेका होलान मेरि आमोई नि
भर्जिन केटी र अन्टी लाई चिकेको - Virgin kt ra aunty lai chikeko Part 4
तिम्लाई मेरो पुती र दूध हेर्दै छोल्नु पर्छ है
भर्जिन केटी र अन्टी लाई चिकेको - Virgin kt ra aunty lai chikeko Part 3
Nepali Lovers Sex Video Part3| Nepali Kanda 2019
Pakistani Naked Photos
Naughty Nepali Disclaimer: The images and videos posted on this sites are not this site original content. All the images and the videos are downloaded from other sites.